Tag Archive for "कपिलवस्तु" - कपिलवस्तुमा प्रहरीको विशेष अप्ररेशन, स्कुलले बालबालिका त्रसित !
कपिलवस्तु । नेकपाका केन्द्रिय अध्यक्ष नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा प्रहरीको विशेष अप्ररेशन सुरु भएको छ । बुधबारराती नेकपाका कार्यकर्ता कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वडा नं ९ अन्चलपुर बस्ने वर्ष ३९ का दुर्गा बहादुर रोकालाई प्रहरीले हातियार सहित पक्राउ गरेको वडा प्रहरी इन्चार्ज महेश्वर उपाध्यायले नेपाल बहस डटकमलाई जानकारी दिए । इन्चार्ज उपाध्यायका अनुसार पक्राउ परेका रोक्काको घर ... थप पढ्नुहोस्
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा गोली लागेर विप्लब नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । शिवराज नगरपालिका ९ मा घर खानतलासी गर्ने क्रममा भागेपछि प्रहरीले गोली हान्दा नेकपाका कार्यकर्ता दुर्गाबहादुर रोका घाइते भएका हुन् । प्रहरीले घटनाको पुष्टि नगरे पनि प्रत्यक्षदर्शीले रोकाको खुट्टामा गोली लागेको बताएका छन् । रोकाको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था भने सामान्य रहेको अ... थप पढ्नुहोस्
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटना बढेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ को तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म महिला हिंसाका १६९ वटा उजुरी परेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का उपसचिव पवन भट्टका अनुसार उक्त तथ्यांकमा हिंसामा पर्नेहरु अझै छुटेको बताए। विभिन्न हिंसामा परेर पनि महिलाले हिंसा सहने हुँदा धेरै घटना बाहिर नआएको उनको भनाइ छ। शिवराज नगरप... थप पढ्नुहोस्
कृष्णनगर । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ८ मा पर्ने देवीपुर गाउँ लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेको छ । विसं २०५९ मा बस्ती विस्तार भएको सो गाउँमा करीब ११९ घरपरिवारको बसोबास छ । विसं २०६४ को कपिलवस्तु घटनामा विस्तापित भएकालाई पुनस्र्थापना गरी निर्माण गरिएको उक्त बस्ती एकदशक बितिसक्दासमेत लालपुर्जाविहीन छ । विसं २०६४ को घटनामा उजाड बनेको सो गाउँमा कारितास नेपाल र सहज नेपालले पुनर्वासका लागि करीब रु. ५५ ल... थप पढ्नुहोस्
कपिलवस्तु । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका गोरुसिंगे नजिकै बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् ।कृष्णनगरबाट बुटवलतर्फ जांदै गरेको लु १ ख ५८३३ नम्बरको बस गोरुसिंगेबाट पूर्वतर्फ जंगल किनारमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनमा परी १५ जना घाइते भएको प्रहरी उपरीक्षक अच्युतम पुडासैनीले बताए ।घाइतेमध्ये ८ जनालाई जितपुरमा उपचारपछि घर पठाइएको र बांकी ७ जनालाई थप उपच... थप पढ्नुहोस्
कर्फ्यु १२ बजेसम्मका लागि हट्यो, जनजीवन सामान्य
काठमाडौं । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि लगाएको कर्फ्यु हटाएको छ । आज बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु हटाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । स्थानीय हिन्दु समुदाय र मुस्लिम समुदायबीच विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु लगाएको थियो । कर्फ्यु हटेपछि भारतीय सीमावर्ती कृष्णनगरको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । श... थप पढ्नुहोस्
कपिलवस्तु । दुर्गा भवानीको मूर्ति सेलाउने क्रममा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा विवाद हुँदा कपिलवस्तु प्रशासनले लगाएको कर्फ्यु आज बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि हटाएको छ । कर्फ्यु हटेसगैँ जिल्लाको जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ । शुक्रबारदेखि कृष्णनगर तनावग्रस्त बनेको थियो । विवाद तीन दिनसम्म पनि साम्य नभएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन हिजो साँझ ५ बजेबाट अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइएको थियो । तीन दिनदेखि रोक... थप पढ्नुहोस्
१९ चैत, काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा एकै पटक दुई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा लम्तीय सिँचाइ आयोजना र नगरपालिका–८ मा दोहनी सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ विकास डिभिजनअनुसार लम्तीयामा रु आठ करोड ७४ लाख र दोहनीमा रु नौ करोड ९१ लाखको आयोजना निर्माण हुँदैछ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास गर्दै पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला... थप पढ्नुहोस्